एप्पलले यसपालि नयाँ के-के ल्यायो? यी हुन् चार नयाँ घोषणा – MySansar
प्रविधिको जगतमा पनि यसो गर्न लागेको छ, उसो गर्न लागेको छ भनेर कुरा लिक हुने गर्छ। दुई वर्षअघि नै यसबारे गाइँगुइँ सुनिएको हो। तर कम्पनीले यसबारे केही बताएन, कुरो गोप्य नै रह्यो। आजको कार्यक्रममा बल्ल एप्पलले एयरट्यागको घोषणा गरेको हो।
खासमा यो सामान खोज्ने (आइटम ट्रयाकर) सानो उपकरण हो। यसलाई तपाईँको साँचोमा, ब्यागमा वा पर्समा राख्यो र कहाँ राखेको बिर्सियो भने खोज्नलाई काम लाग्छ। यसले कसरी काम गर्छ त ? यो सानो उपकरणलाई तपाईँको सामानमा टाँस्नु पर्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईँको आइफोन वा आइप्याडमा रहेको फाइन्ड माइ एपमा जोड्नु पर्छ। अब खोज्न पर्‍यो भने जसरी आइफोनलाई फाइन्ड माइ एपमार्फत् लोकेट गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै गर्न सकिन्छ।
स्टेनलेस स्टिलले बनेको गोलो आकारको पानी र धुलो छेक्ने क्षमता भएको दावी गरिएको यो उपकरणमा ब्याट्री र सानो स्पिकर पनि हुन्छ। यसमा यु १ चिप हुन्छ जसले अल्ट्रा वाइडब्यान्ड टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्छ। यो एयरट्याग एउटाको २९ डलर (३५ सय रुपैयाँ जति) र चार वटाको ९९ डलर तोकिएको छ।
यो कुनै नयाँ कुरा भने होइन। सामसुङ, सोनी र टाइलले पनि लोकेसन ट्रयाकर बजारमा ल्याइसकेका छन्।
एन्ड्रोइड फोन छ भने प्लेस्टोरमा जिमेल साइन भएको भए त्यही इमेलमा लग इन गरेर गुगलमा where is my phone टाइप गर्दा पनि फोन कता छ लोकेसन देखाइदिने गर्छ।
२) एम १ चिपसहितको नयाँ आइम्याक
यसपालि एप्पलले घोषणा गरेको आइम्याकमा एम १ नामको नयाँ चिप मात्र छैन, यो चिपकै कारण ठाउँ सानो भए हुने भएर डिजाइन पनि नयाँ गरिएको छ। यो आइम्याक एकदम पातलो देखिन्छ।
आइम्याक अब २४ इन्चको स्क्रिनसहितको हुनेछ। त्यसमा ४.५ के डिस्प्ले हुनेछ ११.३ मिलियन पिक्सेलको। यस पटक आइम्याकको क्यामेरामा पनि सुधार गरेको छ आइम्याकले।
आइम्याकको मूल्य १ हजार २९९ डलरदेखि सुरु हुनेछ।
३) आइप्याड प्रो
एप्पलले आफ्नो आइप्याडमा पनि यो पटक ठूलो परिवर्तन गरेको छ। एम १ चिपसहितको आइप्याड प्रोको १२.९ इञ्चको संस्करणमा लिक्विड रेटिना एक्सडिआर डिस्प्ले राखिएको छ। १० हजार भन्दा बढी मिनी एलइडीसहितको स्क्रिनका कारण हाइ ब्राइटनेस सम्भव भएको कम्पनीको दावी छ। ११ इञ्चको संस्करणमा भने लिक्विड रेटिना डिस्प्ले राखिएको छ। एक्सेसरिजमा म्याजिक किबोर्ड र एप्पल पेन्सिल पनि रहेको छ।
४) अन्य उत्पादन
एप्पलले मंगलबार घोषणा गरेका अन्य उत्पादनहरुमा आइफोन १२ को बैजनी रङ्गको संस्करण, आइम्याकको कीबोर्डमा फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, ४ के स्ट्रिमिङ गर्न सक्ने एप्पल टिभी र नयाँ रिमोट रहेका छन्।